Nanamboatra trano eran-tany ny Vavolombelon’i Jehovah mba hisahanana ny asa fitoriana, ka mety tsara ny iantsoana azy ireny hoe Betela. Midika hoe “Tranon’Andriamanitra” mantsy io anarana io. (Genesisy 28:17, 19, fanamarihana ambany pejy) Ny Betela any Etazonia no foiben’ny Vavolombelon’i Jehovah. Any no misy ny Filan-kevi-pitantanana, ary izy io no miandraikitra ny asa any amin’ny Betela (biraon’ny sampana) eran-tany. Fianakavian’ny Betela no iantsoana an’ireo manompo any amin’ny Betela, satria miaraka ao foana izy ireo, na manompo izany na misakafo na mianatra Baiboly.—Salamo 133:1.